‘हिरोइनसँग नाम जोडिएकै हो’ - Naya Patrika
‘हिरोइनसँग नाम जोडिएकै हो’
दीपेन्द्र सापकाेटा काठमाडाैँ | पुष ०८, २०७४
‘हिरोइनसँग नाम जोडिएकै हो’ – फिल्मी क्षेत्रका कलाकार, प्राविधिक आदिको नजरमा म रिसाहामा गनिँदो रहेछु । यो टाइट छ त्यसैले यसको अगाडि धेरै बोल्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको कन्सेप्ट रहेको पाएको छु । मसँग काम गर्न गाह्रो छ, भनेर उनीहरूले हल्ला गर्दा रहेछन् ।
उनीहरूले भनेजस्तो म रिसाहा छैन । ममा त्यस्तो हिटलरी शैली छैन । हो, म कामचोरका लागि चाहिँ रिसाहा हुँ । समयको ख्याल नगर्नेसँग रिसाउने हो । मेरो कन्सेप्ट अनुसारको काम भएन भने मलाई रिस उठ्छ ।
दयाराम दाहाल, फिल्म निर्देशक
स्थिर स्वभावकै कारण फिल्ममा टिकेँ
व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म कमलो स्वभावको मान्छे हुँ । बढी भावनात्मक छु । मान्छेले पाएको सानो–सानो पीडाले पनि मलाई धेरैबेरसम्म घोचिरहेको हुन्छ ।
मेरो स्थिर स्वभाव छ । अस्थिर भएको भए त म २९ वर्षसम्म चलचित्र क्षेत्रमा भइरहने थिइनँ होला नि ! निर्देशक भएर काम गरेको नै २४ वर्ष भइसक्यो ।
घरमा पनि कसैले काम ठीक ढंगले गरिहेको छैन भने म रिसाउँछु । म त्यस्तो कुरामा हस्तक्षेप गर्छु । म आफू समयको कुरामा पंचुअल छु, अरूबाट पनि त्यही चाहन्छु ।
स्वार्थी बन्न नसक्नु मेरो कमजोरी
व्यक्तिगत जीवनमा म कहिल्यै स्वार्थी बन्न सकिनँ । मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थ हुनुपर्ने रहेछ । मैले सधैँ साथीहरूलाई निःस्वार्थ सहयोग गर्न चाहेँ । कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेँ । घाटा भयो ।
कतिपय चलचित्रमा फ्रीमा काम गरेको छु
मैले तीन दर्जनभन्दा बढी चलचित्र निर्देशन गरेँ । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सफल छन् । मलाई बजारमा महँगो निर्देशक भन्दा रहेछन् । म आफूलाई महँगो वा सस्तो केही भन्न चाहन्नँ । म मात्र यत्ति भन्न चाहन्छु, हामी भनेका मजदुर हौँ । हामीले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । कतिपय चलचित्रमा मैले फ्रीमा काम गरेँ । तर, उनीहरूले मेरो गुन देखेनन् ।
डिजिटल प्रणालीका कारण केही सुस्ताएँ
अहिले चलचित्रमा डिजिटल प्रणाली आएको छ । यसले गर्दा पहिलाको तुलनामा अति नै धेरै चलचित्र बन्न थाले । तसर्थ, यस्तो भिडमा स्तरीय चलचित्र बनाउन सकिएन भने हल नै पाउन गाह्रो छ । प्रविधि, कलाकार छनोट र प्रचार–प्रसारजस्ता सबै कुरामा कम्पिटिसन छ ।
यी सबै मिट गर्न हामीजस्ता पुरानालाई गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले, वर्षमा एउटा तर राम्रो फिल्म बनाउँ भन्ने सोचेको छु । मैले अब कमर्सियल धारभन्दा फरक धारका फिल्म बनाउने छु । त्यसका लागि म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रिसर्चका लागि जानेछु । अब मानिसको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित फिल्म बनाउनेछु ।
आफूलाई मल्टिट्यालेन्टेड मान्दिनँ
मैले यो कुरा बाहिर ल्याएको थिइनँ । म कवि पनि हो र साहित्यकार पनि । मेरो एउटा कवितासंग्रह चाँडै बजारमा आउँदै छ । मैले साढे तीन सयभन्दा बढी त गीत (चलचित्रका सँगै) नै लेखेँ । म निर्देशकसँगै अभिनेता, कलाकार, स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, गायक, गीतकार सबै हुँ । तर, म आफूलाई मल्टिट्यालेन्टेड मान्दिनँ । आफूले जानेका जेजति काम छन् ती गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यी मैले गरेका सबै काम प्रोफेसनल थिएनन् । जति जानेको छ त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हो ।
हिरोइनसँग नाम जोडिएकै हो
हामी चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेका सानातिना कुरा पनि छिट्टै मिडियामा आउने गर्छन् । मलाई नायिका निरुता सिंहसँग नाम जोडेर गसिप बनाइयो । धेरैपटक नाम जोडियो । ‘दक्षिणा’ फिल्ममा अभिनय गरेपछि निरुताजी दार्जिलिङ फर्किनुभयो ।
लामो ग्यापपछि उहाँले मेरो फिल्म ‘ठुल्दाइ’बाट कमब्याक गर्नुभयो । त्यसपछि मेरै दुई–तीनवटा चलचित्रमा लगातार खेल्नुभयो । यसैलाई आधार बनाएर हामीबीच अफेयर रहेको हल्ला चलाइयो । म अलरेडी विवाहित थिएँ । तसर्थ, यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्न जरुरी ठानिनँ । हाम्रो सम्बन्ध निर्देशक र कालाकारको भन्दा बढी थिएन ।
चुरोट लुकाएर पिउन खोज्छु
म सिगरेट गज्जबले पिउँछु । दिनको सात–आठवटै पिउँछु । श्रीमती सरला र छोरा दर्शनले भेटे भने भाँचिदिन्छन् । तैपनि लुकाएर पिउँछु । पाँच वर्षअघिसम्म रक्सी र मासु खुबै खान्थेँ । आजकल रक्सी बन्द भयो भने मासु कम गरेको छु । आमाको निधनपछि रक्सी खानै छाडे । रक्सीले केही हानि पुगेको महसुस गर्दै छाडेको हुँ ।
वामपन्थीलाई पनि लोकतन्त्रवादी देख्छु
कलाकार राजनीतिमा आउनु आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन । म पनि राजनीतिमा सचेत छु । नेपालका वामपन्थीहरू पनि मलाई लोकतन्त्रवादी लाग्छ । कांग्रेस त त्यसै लोकतन्त्रवादी भइहाल्यो । मेरो विचारमा वामपन्थीको बहुमत ल्याउँदैमा लोकतन्त्रिक व्यवस्था मासिँदैन । यो त संविधानमै उल्लेख छ नि ! तसर्थ, जसले जितेर सरकार बनाए पनि मलाई उस्तै लाग्छ ।